बलात्कारी श्रीमानको हत्या गर्ने महिलालाई सुनाईयो मृत्युदण्डको सजाय !
बैशाख २८, २०७५ BNNTV
एजेन्सी । अफ्रिकी देश सुडानमा अदालतले एउटी युवतीलाई बलात्कारी श्रीमान गरेको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उनलाई श्रीमान्को हत्या गरेको अभियोग अदालतले मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको हो।
१९ वर्षीय सुडानी महिला नौरा हुसेनले आफुलाई बलात्कार गरेर हैरान बनाई बिवाह गर्न बाध्य परेको भन्दै आफ्नै श्रीमान् हत्या गरेकी थिइन्।हत्यापछि श्रीमान्को परिवारले आर्थिक जरीवान लिन नमानेपछि उनलाई अदालतले मृत्युदण्ड नै दिने सजाय सुनाएको थियो। अदालतको फैसलापछि परिवारजनले आफुहरुले हर्षको सास फरेको प्रतिकृया दिएका छन्।
नौराको परिवारले नौरा १६ की हुँदा मृतक युवकसँग आफूहरुको दवावमा विवाह गराईदिएका थिए। तर नौरा विवाह समारोह नै नसकिंदै त्यहाबाट भागेर आफन्तकोमा गएर बसेकी थिइन्। विवाहबाट भागेकी उनी ६ दिन बित्दा पनि नफर्केपछि नौराका श्रीमानले परिवारकै सल्लाह अनुरुप उनलाई बलात्कार गरेका थिए।
त्यसपछि नौराका श्रीमानले उनलाई पुन: दोस्रोपटक बलात्कार गर्न प्रयास गरेपछि उनले छुरा प्रहार गरी हत्या गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, बैशाख २८, २०७५१७:१९
भारतीय प्रम मोदीबाट मुक्तिनाथमा पूजा: हिमाली जनताको मन जित्न मोदीले यस्तो गरे! (तस्विरसहित )